FANOMBOHAN’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA : Samy nanao izay ho afany ireo kandidà
Omaly tamin’ny 6 ora maraina no nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina kaominaly. 6 novembre 2019
Ho an’ny andro fanombohana dia nilamina tanteraka ny fiatrehan’ireo kandidà sy ny mpanohana izany. Samy nanao izay ho afany ireo mpilatsa-kofidiana tsirairay avy ho an’ny teto Antananarivo Renivohitra sy tamin’ireo Kaominina manodidina. Tamin’ny ankapobeny dia saika niompana tamin’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fangatahan-tsodrano no noentin’ireo Kandidà nisantarana ny fampielezan-kevitra, omaly.
Nisy tamin’ireo Kandidà kosa no avy hatrany dia niroso tamin’ny famoriam-bahoaka toa an’i Naina Andriantsitohaina, Kandidà ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra laharana faha-4 ao anatin’ny biletà tokana. Tetsy amin’ny kianja mitafo Mahamasina no nanombohany ny fihaonana tamin’ny vahoakan’Antananarivo, omaly. Ho an’ny Kandidà Faniry Rakotoarisoa na i Gagstabab kosa indray dia fitetezana ireo boriborintany enina teto an-drenivohitra no noentiny niaraka tamin’ireo mpanohana azy nanombohana ny praopagandy.
Manana 20 andro ireo kandidà mpifaninana ho ben’ny tanàna sy mpanolotsaina handresen-dahatra ny olom-pirenena hifidy azy ireo. Ao anatin’izay dia mipetraka ny lalàna hifehezana an’ireo kandidà mba tsy hisian’ny fihoaram-pefy. Manamafy ny Ceni fa raha toa ka misy ireo minia tsy mandika lalàna dia hentitra ny sazy miandry azy ireo.